Tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay inaanu garoomada kusoo dedejin doonin Thiago Alcantara |
HomeWararkaTababare Jurgen Klopp ayaa sheegay inaanu garoomada kusoo dedejin doonin Thiago Alcantara
Tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay inaanu garoomada kusoo dedejin doonin Thiago Alcantara
Thiago Alcantara ayay garoomada ugu dambaysay October 17 oo laga joogo bil iyo dheeraad markaas oo uu dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii Everton ay ku kala baxeen 2-2.
Kubbad-sameeyaha reer Spain ayuu taako xun ku qabtay Richarlison oo isagana lagu abaal-mariyey kaadh casaan ah, waxaanu illaa hadda Thiago seegay lix ciyaarood oo iskugu jira Premier League iyo Champions League.
Maqnaanshihiisu wuxuu ka dhashay dhaawac. Wuxuu ahaa laag toos ah oo jilibka kaga dhacay, kaasina wuxuu sababay dhaawac.” Ayuu yidhi Jurgen Klopp oo intaa ku daray: “Dadku waxay hamuun u qabaan inay arkaan, aniguna sidooda ayaan ahay, laakiin waxba kama beddeli karayo waxyaabahan.
Waa inaanu la tacaalno cawaaqibka ka dhashay dhaawacyada, shilalka, qaladaadka iyo wax kasta. Kulankan (Everton) waxay ahaayeen qaladaad aad u xun, haddii uu hore usii ciyaari karayna wuu ciyaari lahaa, laakiin muu karayn.”
Jurgen Klopp waxa uu xaqiijiyey in laacibka reer Brazil ee Fabinho uu si caadi ah ula qaatay tababarka kulamadii ugu dambeeyey kooxdiisa, sidaas darteedna uu xisaabta ku darsan doono, waxaanu yidhi: “Fabinho wuxuu nala qaatay tababarka, laakiin waynu ogaan doonaa maadaama aanan illaa hadda arag sida uu uga falceliyey, balse tababarka caadiga ah wuu nala qaatay.